Fuulawwan namaa sobaa (fake faces) maali? Akkamiin adda baafachuun danda’ama? – ኢትዮጵያ ቼክ
Fuulawwan namaa sobaa (fake faces) maali? Akkamiin adda baafachuun danda’ama?
Namoota suuraan isaanii mul’atu kunneen keessaa hagam isaanii beektu?
Suuraawwan kun suuraa namoota dhugummaan jiran yookin jiraatanii kan lubbuun darbe miti.
Suuraawwan kunneen hundi suuraalee sobaa kan tekonoloojii GANs (generative adversarial network) jedhamuun hojjetamanidha.
Marsariitiin ‘ThisPersonDoesNotExist.com’ jedhamu immoo hubannoo namtolchee (Artificial Intelligence) fayyadamuun suuraawwan bifa namaa qaban kunneen hojjeta.
Haaluma kanaan isinis marsariitii ‘ThisPersonDoesNotExist.com’ keessa seentanii hanguma fuulicha (tab) irra deebiin feetan (‘reload’ tolchitan) suuraawwan fuula namootaa sobaa haaraa isinitti agarsiisa.
Fuulawwan namaa sobaa fi odeeffannoowwan sobaa…
Suuraawwan fuula namootaa sobaa tekinoloojii GAN jedhamuun omishaman ija namaatiin adda baafachuuf baay’ee rakkisoodha.
Kanaafis namootni suuraawwan sobaa kunneenitti fayyadamuun akkaawuntiiwwan midiyaalee hawaasummaa akka Feesbuukii, Inistaagiraamfi Tiwiitaraa banachuun nama dhugaa fakkaachuun waa barreessuu, namoota waliin haasa’uufi duulawwan gama midiyaalee hawaasummaatin taasifaman irratti yeroo hirmaatan mul’ata.
Suuraawwan kunneen odeeffannoowwan sobaa tamsaasuuf faayidaarra yeroo oolanis mul’ata.
Namoota dhuunfaan dabalataan dhaabbileenis suuraawwan fuula namaa sobaa hubannoo namtolcheen (Artificial Intelligence) hojjetamanitti fayyadamuun akkaawuntiiwwan sobaa midiyaalee hawaasummaa banuun wayita fayyadaman qorannoon irra gahameera.
Gama biraatiin suuraawwan bu’aa tekinoloojii ta’an kunneen dhaabbilee mosaajiiwwan omishan, dizaayinaroota fi dhaabbilee biroo kan suuraawwan namoota sirrii fayyadamuu hin barbaadneen yookin hin dandeenyeen faayidaarra yeroo oolan mul’ata.
Dabalataan qaamoleen seera raawwachiisanis namoota yakkawwan garaagaraa dalagan to’annoo jala oolchuuf suuraawwan kunneenitti fayyadamu.
Fakkeenyaaf suuraawwan fakkaattii daa’immanii sobaan akkaawuntii midiyaalee hawaasummaa banuun namoota daa’imman qocollaa saalaaf adamsan to’annoo jala ittiin oolchu.
Fuulawwan namaa sobaa (fake faces) akkamiin adda baafachuun danda’ama?
Miidhaa suuraawwan fuula namaa sobaa qaqqabsiisan hir’isuuf tarkaanfiin inni ijoofi jalqabaa hubannoo hawaasni dhimmicharratti qabu guddisuu akka ta’e beektotni himu.
Dhimmicharratti hubannoo qabaachuun fakkiiwwan namootaa midiyaalee hawaasummaarratti arginu mara callisnee amanuurra akka shakkinu akkasumas ragaa irratti hundoofnee akka amannu nu gargaara.
Dabalataan suuraawwan fuula namaa sobaa kunneen ija namaatiin adda baasuuf ulfaataa ta’anis malootni suuraawwan kunneen adda baafachuuf nu gargaaran muraasni jiru.
Fakkeenyaaf haalli teessuma mataa “nama” suuricharra jiruu/tuu funyaan yookiin ilkaan walin kan wal hin simne ta’uu danda’a.
Dabalataan tekinoloojichi al tokko tokko suuraa fuula “namaa” fi dubduuba (background) isaa walsimsiisuuf yeroo rakkatu mul’ata. Kanaafis suuricha sirriitti ilaalanii xiinxaluun mudaawwan wal simannaa suuricharra jiran hubachuun ni danda’ama.
Gama biraatiin dhaabbileen mootummaafi dhuunfaa tekinoloojiiwwan suuraawwan namootaa sobaa kunneen adda baasuu (beekuu) danda’an hojjechaa jiru.